အဝေးေ၇ာက်မိတ်ဆွေများအတွက် …အမှတ်တရ ( kamayuat ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » အဝေးေ၇ာက်မိတ်ဆွေများအတွက် …အမှတ်တရ ( kamayuat )
အဝေးေ၇ာက်မိတ်ဆွေများအတွက် …အမှတ်တရ ( kamayuat )
Posted by fatty on Dec 14, 2010 in News | 16 comments
KA MA YUAT
တခါတုန်းက ပင်မ တက္ကသိုလ်ကြီး စည်ကားချိန်မှာ ကျောင်းသား ကျောင်းသူတွေ နဲ့လှည်းတန်း ကမာရွတ် ဆိုတာ
အရမ်းကိုစီကားတဲ့နေရာလေးပါ ဦးချစ်လဘက်ရည်ဆိုင်ကလည်း ဆိုင်ခွဲရှိတယ်လေ ….။
လဘက်ရည်ဆိုင်ကနေ ထိုင်ပြီး ဖြတ်သွားဖြတ်လာ ကျောင်းသူလေးတွေကို ငေးခဲ့ရတာနှစ်ပေါင်းများစွာပါ ..။
အခုတော့ရောက်တုန်း အမှတ်တရ လှည်းတန်းမြင်ကွင်း လေးတွေ … ကြုံရိုက်ရိုက်ရတာမို့ သိပ်တော့မကောင်းဘူးပေါ့ ….။
ဓါတ်ပုံတွေ တင်လို့မရပါလား ….။ နောက်တခါမှကြိုးစားကြည့်အုံးမယ် ..။ internet ဆိုင်တွေကိုလဲ pressure ပေးထားတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
နားလည် သူများကြိုးစားကြည့်ကြပါအုံး …..။
ကိုင်ဇာရဲ့ သီချင်းမှာ ပါတဲ့ ဦးချစ်လက်ဖက်ရည် ၊ နောက် လှည်းကလေးနဲ့ ဒိန်ချဉ် ၊ ၀င်းဆံသ ၊ လှည်းတန်းဈေး ၊ အားလုံး သတိရစရာတွေပါ .. ကိုဖက် ဓါတ်ပုံပြမှ ပြန်လွမ်းကြည့်မယ် ၊ အခုတော့ ဓါတ်ပုံ မတွေ့ရတော့ ..
ခြောက်နာရီတောင် ထိုးပြီးပါပေါ့လေ ..
etone လည်း ကိုဖက်တီးအရွယ်ရောက်သွားရင် ကျောင်းတက်တုံးက တော်ဝင်လမ်းမကြီးအကြောင်းရေးမယ် အဟဲ… တော်ဝင်လမ်းဆိုတာ တော်တော်လေး လမ်းလျှောက်ဝင်ရလို့ပါ … နေပူကျဲကျဲ ထီးမပါလို့ကတော့ လမ်းလျှောက်ရင်း ငါးခြောက်… အဲ လူခြောက်ဖြစ်ပြီသာမှတ် … ကားမှတ်တိုင်4မှတ်တိုင်စာလောက်ကို အရိပ်ရသစ်ပင် တစ်ပင်ပဲရှိပါတယ် ။ ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ်ရောက်ဖူးတဲ့လူတိုင်း etone ပြောတဲ့ တော်ဝင်လမ်း ကြီး အကြောင်းသိမှာပါ ။
please try again ti upload photos….
သစ်ပုတ်ပင် အကြောင်းပြောရရင် လွမ်းတာအပြင်ဆွေးတာပါ ပါလိမ့်မယ်ထင်တယ် … အပင်ကြီးလဲဆွေးတောင်ဆွေးပြီ
လားမသိဘူး …။ ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမကြီးရယ် သိပ္ပံဆောင်ဘက်လာတဲ့ ထင်းရှုးပင်တန်းနဲ့ လမ်းလေးရယ် … canteen
တွေရယ် တက္ကသိုလ်စာကြည့်တိုက်ကြီးရယ် ဓါတ်ပုံရိုက်ချင်ရင်တော့ အထက်ဘုံ စာတင်ရမယ်ထင်တယ် ….
ဘာဖြစ်ဖြစ်လေ …ကျုပ်ကတော့လုပ်ချင်ရင် မဖြစ်ဖြစ်အောင် လုပ်အုံးမှာ ….။
အင်းလျားကန် တို့ ဘူးသီးကြော်ဆိုင်တို့မပါတော့ဘူးလား
ကျွန်တော်ကမန္တလေးတက္ကသိုလ်နေရတော့ တက္ကသိုလ် အကြောင်းပြောရင် မိန်းအဆောက်အဦးပေါ်ကို ခုန်ဖိနပ်နဲ့ တက်ခဲ့တာသတိရတယ်ဗျာ ပါချုပ်ကတောင်မှ “သားမှာ ဖိနပ် မရှိရင် ၀ယ်ဖို့ ပိုက်ဆံလိုက်ယူ” ဆိုပြီး ရုံးခန်းခေါ်သွားတာ အားနာတာနဲ့(ကြောက်တာလည်းပါတာပေါ့)လိုက်မယူဖြစ်ပါဘူး သူလည်းနောက်နှစ်ကျတော့ ၀န်ကြီးတက်ဖြစ်ပြီး ကံမကောင်းပါဘူး ဘယ်ရောက်သွားလဲတောင်မသိတော့ဘူး
အချစ်ဟောင်းလေး သတိရနေတာနဲ့ … အင်းယားနဲ့ ဘူးသီးကြော်ဆိုင်မေ့သွားတယ်
လမ်းဖြတ်ကူးတာတောင် ကားတိုက်တော့မလို့ … စိတ်က အတိတ်ပြန်ရောက်သွားတာလေ … ဟဲဟဲ
နောက်တခါ ထပ်ကြိုးစားပါအုံးမယ် …
အဓိကက .. ပြည်ပမှာနေကြတဲ့ ဘော်ဒါတွေ ( ကျနော်တို့ခေတ်က အခေါ် ) အတွက်ပါ …။
ရွှင်လန်းကြပါစေ အားလုံး ….။
ဖိုးချိုရဲ့ မာလာဆောင်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပုံပြင်တို့ .. ကျောပေါက်ကြီးတို့လဲ လိုသေးတယ် .. ဂျပ်ဆင် လဲ ပါရဦးမယ် .. ဒါထက် မသိခဲ့လို့ မေးကြည့်ရဦးမယ် .. ဘွဲ့နှင်းသဘင်ရှေ့က ခြင်္သေ့က အထီးလား အမလား ..
မြန်မာ ခြင်္သေ့ စစ်စစ် မှန်ရင် ခြင်္သေ့ နှစ်ကောင်လုံးက အထီးတွေကြီးဘဲ..
တရုတ်ခြင်္သေ့မှ အထီး တကောင် အမ တကောင် အထီးလက်အောက်က ဘောလုံး အမ လက်အောက်က အကောင်ပေါက်ကလေး
တက္ကသိုလ်တက်တုန်းကတော့ လှည်းတန်းမှတ်တိုင်ကို စိတ်နာခဲ့ဖူးတယ် … မြို့ထဲကနေ လှည်းတန်းမှတ်တိုင်အထိ ၁ ကျပ်၊ အဲဒီကကျော်ရင် ၂ ကျပ်တဲ့ … မာလာဆောင်ကိုပြန်ဖို့ လှည်းတန်းကဆင်းပြီး လမ်းလျှောက်ရတယ် … မြို့ထဲသွားချင်ရင်လဲ လှည်းတန်းအထိ လမ်းလျှောက်လာပြီးမှ ကားစီးရတယ် … အဲဒီတုန်းက ၁ ကျပ်က တန်ဖိုးရှိတယ် …
ဟေး.. လိင်တူဆက်ဆံမှုအစ ဒို့မြန်မာခြင်္သေ့တွေကကွ။ (အန်တီဆူးပြောတာနော်)
ဦးကြောင်ကြီး တံခါးမှုးတို့ ဂိတ်ပေါက်စောင့်တို့ မမြင်ဘူးဘူးလား.. မိန်းမ နဲ့ ယောကျား တွဲထားတော့ ကြူပြီး အီနေကြတာနဲ့ အလုပ် ကို ကောင်းကောင်း မလုပ်ဘဲ တခြား အလုပ်တွေ ဖြစ်ကုန်မှာ စိုးလို့.. မာန်ထောင် တင်းတင်းနဲ့ ခြင်္သေ့နှစ်ကောင် သေချာ စောင့်ခိုင်းတာ.. ဟွင်း.. ပေါက်ကရ တွေးတယ်။
ဝေေ၀ရေ .. ဒို့ ကျောင်းတက်နေတုန်းက ရန်ကုန်မြို့ထဲကို လှည်းတန်းက တမတ်ပဲ ပေးရတယ် .. အသွားအပြန် ငါးမူး .. လှည်းတန်းက လှိုင် ဒေသကောလိပ်ကို ပြားနှစ်ဆယ် ကျတယ် .. (၁၉၇၇)
အန်တီမိုး အသက်က ဆူး အမေ အရွယ်လောက် ရှိမယ် ထင်တယ်
၅၂ ကျော်ပြီ .. ယုံလား ..